October 13, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 17
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay diidmada Kenya ee kuwajahan go’aankii ay shalay gaartay maxkamadda Cadaalada Aduunka ee ICJ, waxayna sheegtay in ay ka xun tahay talaabada Kenya oo ay og tahay ujeedada ka dambeysa.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa yiri “Waxaan aaminsanahay in shacabka iyo dowladda Kenya ay ogyihiin in aysan wax dan ah ugu jirin in uu xumaado xiriirka labada dal, waxaan ka shaqeyn doonaa dhankeenna in uu wanaagsannaado xiriirka labada dal, laakin haddii ay diidaan waxyaabaha ay nabaddu ku hagaageyso, dowladda Soomaaliya waxa ay u taagan tahay oo mas’uuliyadeedu tahay difaaca dadkeeda, dalkeeda, diinteeda iyo biyaheeda.”
HALKAAN KA DAAWO WARBIXIN DHEER
Mr, Balal ayaa sheegay in Kenya diidmadeeda iyo ku qabsigii Badda ay ahayd mid ay ku xumeysay xariirka labada dal, mar kastana yoolkeedu ahaa sidii ay u cadaadin lahayd Soomaaliya, basle ay sicad u diideen damaceeda oo ay kaga kalsoonaadeen maxkamadda Cadaalada Aduunka.
“Kenya waxa ay ku doodeysay in labada dowladood ay kala saxiixdeen heshiis ay murankooda kaga heshiin karaan, sidaas awgeed aan loo baahneen in kiiskan Maxkamad la geeyo ama in hab diblomaasiyeed oo loo marayo ururada ay xubnaha ka yihiin lagu xallin karo muranka, Soomaaliyana waxa ay ku doodday in aysan aqoonsaneen is afgaradkaas.” ayuu yiri Cali Siciid Fiqi, Safiirkii hore ee Soomaaliya ee UNka.
Xeer Ilaaliyihii hore ayaa cadeeyey in ICJ ay ka hortimid MOU-gii uu saxiixay Wasiir Cabrixmaan Cabdishukuur, maadaama ay laaleen Baarlamaankii Soomaaliya, taas ayaana fududeysay guusha Soomaaliya.
Hadaba dowlada soomaaliya waa in ay kenya u aqoonsadaan
1 CADOWGA SOMALIA
2 WAA IN LAGA SAARAA CIIDAN KENYA XUDUUDA DALKA
3 HADII QADAAD WEYNTU KENYA AY KU ADKEYSTAAN GO AAN KOODA QAR ISKA TUUR NIMADA HAA OGAADEEN SOMALIA WAA FOWDO JECEL 4 SHABAAB AYAY QATI KA TAAGAN YIHIIN MARKAAN XABADII XADKA KABILAAWATAA WAY KEENI TOONTAA GOBANIMO UDIRIR SOMALI GALBEED. MARKA WAXAAN LEE YAHAY KENYA dad dhalo ku jira cariish ma tuuryeeyo
Nin guri muraayay ku jiraa ma tuur yeeyo nin cariish ku jira
Kahor intii aan lagu dhawaaqin go’aanka Maxkamadda Caddaaladda ee Caalamiga ah, waxaan sii diyaarsaday maqaal ahaa dabbaaldeg iyo digasho laakiin markii lagu dhawaaqay natiijadii kiiska ayaan candhuuftayda dib u liqay. Anigoo oo aan arag cid kale oo arrinkaas ka faallootay ayaan halkaan kusoo qoray shalay maqaal aan ku muujinayo sida aan uga qawaday go’aankaas. Anigu ma ahi khabiir sharci laakiin maskaxdayda yar iyo caqligayga kooban waxay i tuseen in Kenya loo gooyey bad aysan xaq u lahayn. Waxay la mid ahayd iyadoo Kenya loo sheegay inay gardaran tahay oo dooddeedii aan laga garaabin laakiin wixii la isku haystay cad loo gooynayo!
Waxaan isku samirsiiyey in laga yaabo in Maxkamaddu hore u xukuntay kiis midkan la mid ah laakiin sida uu sheegay garsoore C/Qawi Yuusuf go’aankaas wuxuu ahaa mid ugub ah oo aan isaga oo kale Maxkamaddu hore u gaarin. Way iska caddahay inaan go’aankaas lagu salayn xaqiiqda juqraafiyeed ee soohdinta iyo badda ee xeerka caalamiga ah balse lagu saleeyey siyaasad ku salaysan dalalka garsooreyaashu kasoo jeedaan.
Ilaa hadda cid dhaliilsan go’aankaas waxaan ka arkay garsoore C/Qawi Yuusuf. Waxaa layaab leh in madaxda dowladda federalka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed go’aanka ku qaateen farxad iyo fardo-kula-carar. Waxay ahayd inay sheegaan inay go’aanka aqbalayaan laakiin aysan u arag mid caddaalad ku salaysan — oo Kenya loogu gooyey bad aysan lahayn. Taasi waxay digniin u noqon lahayd damaca waalan ee Kenya ee aan weli samrin.
Halkaan waxaan kusoo gudbinayaa garsooreyaashii taageeray go’aanka xarriiqa loogu durkiyey waqooyi ee Kenya loogu gooyey badda iyo kuwii diiday. Dadka Soomaaliyeed waa inaysan
illoobin oo xisaabta ku darsadaan garsooreyaashaas iyo dalalka ay kasoo jeedaan.
1. Sebutinde (Uganda)
2. M. Bennouna(Morocco)
4. Hanqin ((China)
5. Gevorgian (Russia)
6. Nolte (German)
7. Iwasawa (Japan)
8. Tomka (Slovakia)
9. Trindade (Brazil)
1. C/Qawi Yuusuf (Somali)
2. Salam (Lebonan)
3. Robinson (Jamaica)
4. Bhandari (India)
5. Abraham (France)
Fadlan sharegaree oo sii fidi
Walaahi aniga xitaa maskaxda ii xanuuntay saa 30% bay free ku Heleen markaas baa party ladhigayaa intii ladoonan lahaa 30% Wali maqan. Tan yasan nahoos Marin
Waa khawano Shiikh Sharif, Cumar C/rashiid,C/raxmaan C/shakuur oo haddii isfahamkii ay Kenya u saxiixeen aanu baarlamaankii xiligaasu diidi lahayn maanta sharci noqon lahaa,maxkamaduna iska diidi lahayd inay dhegeysato maadaama labada dawladood Ku heshiiyeen inay wadahadal Ku dhamaystaan muranka Badda.
Inkasta oo Soomaalidu Ku faraxsantahay woxoogii oo in loo xakumay Kenya,haddana soomaali ayaa dhacan,Kenyana waxay joogtaa guul ah in NFD ubsharciyowdo iyo inay heshay qayb badda Somaliya ah.
MAANSHAALLAAAHO .. Wiikaas dhaladka ah, ee geesiga ah, hadii uu noo joogin lahayn ICJ, waxaa laga yaabi lahaa in badda SOOMAALI WEYN la dhici laha. Wilkaas oo ah AVV. CABDI QAWI.. Waa wiil ka soo jeeda magaaladaas la yiraahdo EYL , ee GAROOWE u jirta 220KM dhina badda ee Indian Ocean.
Hadii uu joogi lahaa wiil ka soo jeeda HAAWEYDA HAWIYAH ama IIDOOR WAGASHLEEE, xoogaa yadh ee sandareerto ah ay ku lunsan lahaayeen BADDA SOOMAALIYEED.
Maxaa dhacay 1964… shirkii caruusha ee TANZANIA… Taariikhda dib ugu noqda.. Hishiishkii 1964 ee Dawlada Somaaliyaa ay ku ogolaatay in la raaciyo NFD waddanka Kenya..
Hishiishkaas CARUUSHA waxaa saxiixay Nin IIDOOR WAGASHLEE isaga oo aan la tashin BARLAMAAN, MADAXWEYNE..
NFD waxaa KENYA raaciyey MOXAMED IBRAHIM CIGAAL isaga oo aan qofna la tashan.
++ SOOMAALI WEYN lama tashin
++ BAARLAMAAN lama tashin
++ GOLI WASIIR lama tashin
++ MADAXWEYNI lama tashin.
Isaga oo xaarku ka dareerayo, oo isku kaashayaa, oo khamriyeesan aa laga saxiixday… hadda waa sidii uu sameeyey AXMED YUSUF DUCAALEEE, oo ahaa JAAJUUS Amxaar, markii laga sameeyey isaga oo daba-laga wasayo..
Marka, SOOMAALI WEYN hal reer baa bad-baadin kara.. waa nimankaas DAAROOD ISMAACIIL JABARTE…
HAAWEYDA HAWIYE, iyaga waxoodo waxaa weeyee, maxaan taabta, maxaan cunaa, maxaan dilaa, maxaan kufsada.. They have no political vision. They are robbers, lotters and rapists.
IIDOOR WAGASHLEEE, wax la yiraahdo waddaniyad ma laha.. Hadii maantay la yiraahdo dhulka IIDOOOR aa la biicinaa, MUUSA HANDRAAB aa ugu horeeyaaa…
Marka, SOOMAALI WEYNII, kani ku tahay XAAR FARMAAJO, waa in la doortaa wiil ka so jeeda DAAROOD ISMAACIIL JABARTE.
Dhexdhexaadintii Tanzania ee Somalia & Kenya ee waagaas waxa Gogol xaadh kulanka labada dal wax dhaafsiisan ma dhicin kadibna milateriga ayaa la wareegay taladii Somalia.
Eeddaada marxuum Cigaal waa been,nacayb qabiil.
Meyd maxaa u dambeeyay baa la yidhi kaa la sii sido.
Wiilka C/Rashiid ayaaba la tilmaamayaa inuu MOA-ga watay.
Tuug aan Daarood ahayn Soomaali kama dhalan Wiil Qardhi caashaqe Barawaani.
Yaa 1987 Shir Jabuuti ka dhacay Itoobiya uga tanaasulay Soomaali galbeed?
NFD lafteeda intii soomaalida la yidhi qaata oo ahayd inta badan NFD waxa diiday C/Rashiid Cali Sharma’arke,go’aamiyayna in Ingiriiska xidhiidha loo jaro,sidaana Soomaalidu Ku weyday dhulkaasna.
Ingiriis inta geelu daaqo qaata ayuu ogolaaday,waase la diiday,isxariifintiina waa uga dartay soomaali.
Reerkaas halayska eego dal xaraashe,bad iibiye.
Waxba ha u difaacin ina Cigaal. Cid walba waa ogtahay inuu gatay NFD.
Dhowr sano kahor ayaa nin aqoonyahan ah wuxuu ku qoray website aad loo akhristo isla markaana ay wax ku qoraan rag aqoonyahanno ah oo Soomaali ah oo badanaa wax ku qora English — qiso uu uga sheekeeyey ninkii goobjoogga ahaa. Ninkaas goobjoogga ahaa wuxuu la socday safar Cigaaal ku tegay Addis Ababa 1960s. Wuxuu sheegay in maalin isaga iyo Cigaal oo fadhiya qolkii Cigaal ka deggenaa hoteelka ay usoo gashay gabar Itoobiyaan ah oo qurux badan oo wadda shandad, kadibna ay u dhiibtay Cigaal. Wuxuu sheegay in shadaddaas oo uu Cigaal furay uu ku rasaysnaa dollar. Wuxuu sheegay in Cigaal $5000 (shan kun) oo dollar siiyey una sheegay inuu afkiisa ka adkaado. Wuxuu sheegay inuu lacagtiisii jeebka gashaday kadibna u firaaqeeyey Cigaal iyo gabadhii. Ninkaasi, dabcan, isaguna tuug kale ayuu ahaa. Hadalkaas wuxuu sheegay muddu kadib geeridii Cigaal. Dad badan ayaa maqaalkaas akhriyey, ninka qorayna ma aha nin qarsoon.
Haddaba, waxaa halkaa ka cad in Cigaal uu xitaa sirtii Qaranka Somalia iyo qaddiyadda Ogandenia ka iibiyey Itoobiya oo aan khiyaanadiisu ku koobnayn NFD.
Cigaal oo aan filayo in dad uu dhalay aysan jirin isla markaana ahaa nin dhaladu mar walba ka ag dhowdahay, layaab maleh inuu waxaas ku kaco. Arrintuse intaas waa ka guda weyn tahay oo waxaa weeye inaysan idin ku jirin jecayl iyo waddaninimo dhaafsan degaannadiinna, waana mid aad oo Soomaali oo dhan kaga duwan tihiin. Inaad kasoo horjeesateen jihaadkii Daraawiishta, amase aad isku daydeen inaad goosataan 1961 — xilli Somalia xor ahayd hal sano oo qura oo aad u nuglayd, amase waxa uu Cigaal sameeyey, iyo tan hadda aad waddaan, waxay muujinayaan inkastoo aad Af Soomaali ku hadashaan, haddana, inaad hoosta ka dareemaysaan in aydnaan Soomaali ahayn. JAARSO (qabiil Itoobiyaan ah oo asalkiisu Oromo yahay) waxay ku hadlaan Af Soomaali ka faseexsan kan Soomaali badan ku hadasho.
adna been abuur marxuum dhintay ayaad lasoo hinqatay!!!
Waar illayn ma xishootaan?
NFD dal bay ka tirsantahay Kenya la dhaho,gumeyste ayaana raacshay,Somalia & Kenya dhexdhexaadintoodii Tanzania waxa laysku afgartay in labada dal ixtiraamo midba kan kale midnimadiisa dhleed,dadka soomaaliyeed ee NFD-na loo daayo masiirkooda,Kenyana ka deyso cabudhinta,qaxinta,waxbarasho la’aanta,waana Ku liibaaneen arrintaas,abaalna waliba uga hayaan marxuum Cigaal oo aan waxba ka bedeli karayn isaga iyo dawladiisuba xuduudihii gumeystaha,balse ka taliyay mustaqbalka dadkaa soomaaliyeed ee dhibka Ku jiray iyo xasuuqa,barakicinta,loons ogolaaday inay lamid nodaan dadka dalku ka dhexeeyo ,helaanna xuquuqo la siman.
Waa uun inta maantaba madaxdiinu Ku cabaadaan EE AH WAXAN XURMEYNAYNAA MADAXBANNAANIDA DHULEED EE KENYA & MIDNIMADEEDA EE TAYADANA HA DHAWRAAN.
Midda Itoobiyana waa lamid,soomaalina dagaalkay Ku qaadday natiijo kama keenin,taageerona kuma helin maadaama loo akàyay dal duullaan Ku ah dhul dal kale,halgankaana halkaad kaga jirteen soomaali loo sheegi maayo.
Inaasu was waxa LA wada ogyahay,kana duwan been abuurkaaga.
Midda cayda & naxliga kale ee aad meesha Ku faygartay haddaan wax kaa idhaahdoash
Horta Jaarso,wixii soomaali abboo lagu sheegay,qotida,jareerta intuba waa idinka in my Book,adaabana sheegaya waxay Ku hadlaan oo aqoon u leh maadaama aad ehel tihiin.
Inaad tihin khaaimiin,bilaa qaddiyad,waddaniyadna hadalkeedaba daa waxa u daliilkii ah
1-Somalia oo ah qaybtii ka xorowday Talyaani yaa gumeystaha keenay?
2-Yaa dilay madaxweynihii umadda C/Rashiid aun,isagoo waliba sadbursiin,tuulo degmo idiinka dhigay,dhowr tuulo gobollo idiinka dhigay,idiin dhiibay wax kasta oo mansab soomaali wada lahay ah,kuna dilay dheeraad?!!!!
3-Yaa fashilinayay halgankii soomaalida 1977?
4-Yaa calanka Itoobiya 1982 ka taagay Galdogob & Balanballe?
M/xigdenkii PL 2015 wuxu sheegay inuu soo arkay calankii Itoobiya oo weli saaran Galdogob.
Dhul Somaliya ayaadba siiseen amxaaro,kuna bedelateen daafi markaasaad NFD ka hadli!!!
5-Yaa caasimadiina kusoo hogaamiyay amxaar,keenayna ciidamada ilaa maanta jooga,kuna bedeshay kursi?
6-Badda yaa iibsaday hadda Somalia loo xukumay ee in Kenya qaqdatay?
Hadafkuna ahaa in Kenya intaa oo laba ceel oo shidaql ahi raaceen?
WAAD IS GARAN EE XISHOOD MEE?
WALAAXAWLAA KUWAASÀABA SOO INDHO CAD IN SHARAFI DHIMATAY!!!!!
Horta, anigu u maleynmayo inaad Isaaq tahay oo dadku siday u hadlaan waan kala aqaan. Wax kasta oo aad tahayba, waxaad tahay ciil-kama-baxe.
Jaarso ma aha Abbo ee waa qabiil ballaaran oo deris la ah Soomaalida Itoobiya, kuna hadla Af Soomaali inkastoo asalkoodu yahay Oromo. Waxaa sidaas oo kale ah Gurgura oo qaarkood ku hadlaan Soomaali. Marka, marka loo fiirsado dhaqankiinna, maxaa diidaya inaad idinkuna kuwaas oo kale tihiin? Degaan ahaanna waad isku dhow dihiin. Rag beeshiinna sheegta oo si cad qolooyin indin ka mid ah ku eedaynaya in asalkoodu yahay Oromo ayaan daawaday dhowr jeer oo kala duwan. Horta, Habar-xabuusheed iyo Habar-magaadle maxay ahaayeen? Sheekh Isxaaq islaantii ugu horreeysay ee wax u dhashay maxay ahayd? Wallaahi, su’aalahaas waa iga daacad.
Cigaal qaddiyado Soomaaliyeed oo aanu cidna kala tashan ayuu ku takrifalay oo ku danaystay. Dadka NFD waxaa nafis u horreeyey markii Maxamed Siyaad heshiiska la saxiixday Kenya 1982 si uu xoogga u saaro Xabasha. Waxaa kale oo cadaadiskii laga dhimay markii General Maxamuud Barrow uu fashilyey inqilaabkii Kikuuyada la damacsanayd Arap Moi. Sidaas ooy tahayna, waxaa xukunkii degdegga ahaa ee la saaray 1967 — laga qaaday 1991 markii Somalia burburtay. Waxaa layaab leh inaad cududaar u sameynayso gumesiga ay Kenya iyo Itoobiya ku haystaan dad iyo dal Soomaaliyeed. Layaab malihid sababtoo ah waxa qura ee aad la wadaagtaa waa Af Soomaaliga aad ku hadasho.
Waxaad tiri tuulooyin baa la idinkaga dhigay degmooyin iyo gobollo. Marka dhulka Daarood ee kale dhinac la iska dhigo, ma taqaan inta ay isu jiraan Gaalkacyo iyo Boosaaso? Waxay isu jiraan inta Gaalkacyo iyo Hargeysa isu jiraan. Adiga dhulkaagu (SNMistaan) waa min galbeedka Ceerigaabo ilaa Gebiley — 430km. Maxaa gobol laguu sameeyaa dhulba ma haysatide? Dhul-la’aan waa waxa aad ugu naabnaabtay dhulka Harti. Bal orod oo gooso SNMistaan; cid kaa soo dabohadlaysa ma arki doontid.
Talyaani ma Majeerteen baa uga yeeray dalkiisii oo u sheegay inuu Somalia qabsad? Majeerteen wuxuu Talyaani la galay heshiis la mid ah kii aad Ingiriis la gasheen laakiin farqigu wuxuu ahaa idinka Ingiriis wuxuu idiin adeegsaday inuu Soomaali cabburiyo; Majeerteen sidaa looma adeegsan, aakhirkiina way la dagaallameen Talyaani oo waa kii boqortooyooyinkoodii burburiyey isla markaana boqorradoodii masaafuriyey? Weligaa ma maqashay wixii dhexmaray Tayaani iyo General Abshir Dhoorre iyo General Cumar Samatar?
Su’aalihii jawaab waad u weyday soo maaha…
Ararow anigu boqortooyana garan maayee shuftadii Daarood ee midna Mj haystay midna Warsangeli inaan anigu mustaafuriyay ayaan taariikhda Ku hayaa.
Cali Shire iyo Kanadiid,Sayidkii,Afweyne!!!!
Bal xisaabta isku darsoo ka dambee raggaas markaa aad isku taagteen waad eedeene.
Gumeyste kaalmaysi xataa waad igu loodin weyday,shufto qabiilaysan,dawlad qabiilaysan oo hub nooc kasta ah.
Dad karaamo leh ayaanu nahay,ciddii isku kaayo taagtana waa hoogaan boowe.
Ina Cigaal ma ahayn khaayin oo ma sadqeeyeen si soomaali laysugu daro dawladnimadii Somaliland,adna waxaad la ordi waxaan waxba ahayn.
Dhul weyn oo saxare ah,kulayl ah,biyo iyo baad toona lahayn,ay Ku nool yihiin tuuladiiba 30 qof waxa dhaama dhul yar oo leh dad camira,kuna noolyihiin bulsho badan,waanaad garan kartaa farqiga u dhexeeya dhul lama degaan ah oo ballaadhan iyo dhul hodan ah,camiran,biyo leh,xoolo joogaan,waxana hubaal ah in hal magaalo oo Isaaq degaa ka dad badantahay dhammaan dadka Daarood ee Soomaalida xorta ah deggan.
Soo tuulooyinka ilaa 60 kii afarta xabbo Ku noolyihiin maaha degmooyinkii,gobolladii laguu magacaabay?
Fashil baa halkaa idinka raacay iyana….
Cumar Samatar sow maaha ninkii amxaarada ka garab dagaalamay isaga iyo woxoogaa beeshiisa ah si ay u helaan woxoogaa daafi ah???
Nin amxaaro talyaani la dagaalamaysa kiraysteen oo quud la’aan uga cararay dhulkiisa soo maaha ninkaad ii sheegi?
Arar iyo noociisa hala doodin waayo reerkaa Daarood waa la yaqaan waxay baabiyaan mooyaane waxba ma hagaajiyaan kaaga daranta dhul ay boobeen oo xaraasheen Gaal madow iyo gaal cadba kusoo hogaamiyeen eedaa ay iyagu lahaayeen ayay cidkale dusha ka saaraan cajiib,,
Sxb kuwan hadal haysaga qasaarin,
Waa duul gaal kalkaalisnimo heer ka gaadhay waxaa koonfur la degi weydey waa maafiyadaa Daarood oo waxwalba shilimaad dhaafsiinaya dal iyo dadba waxay rabaan inay xaalufiyaan waa shufo somali lagusoo dhex tuuray,,
Reerkaas waa reerka somali halkaa dhigay,
Tuugooda ma qabtaan waxayba ku sheegaan halyey bal kasoo biloow,,
Ina cabdale Xasan, Afweyne, cabdilahi yuusuf, kanadiid, kuligood waa wada tuugo khaaimiin wada ahaa,kuwa taageerana waa kuway dhaleen shuftadaa diiratada ah,
Sabuurada nooga fuqa..
Maxay ahaayeen kuwaan aan xishoodka lahayn ee u maleeya keligood inay Puntlandtimes wax ku soo qoraan.
@@@Salax & Runsheeg
Waxaa la yiri aakhiru zamaanka waxaa la arki doonaa Shiikhaal geel dhacaysa iyo Xawaadle oo waaninaya oo ka celinaya. Reer SNMistan baa maanta Daarood ku eedaynayna gaalo kalkaal oo kuna faanaya dhul barwaaqo ah!
Raafkii Laascaanood ee dadka Koonfur Galbeed wuxuu kashifay in Faysal C. Waraabe ka mid ahaa dadkii abaartii Dabadheer uu macaluusha kasoo badbaadiyey Jaalle Siyaad ee diyaaradda lagu keenay Dajuuma, Sablaale, iyo Kurtinwaarrey. Wuxuu ugu abaalguday inuu Meel kasta la taagan yahay cayda Jaalle Siyaad iyo nacaybka Daarood.
Faysal berigaas wuxuu ahaa qaballuus ugu yaraan 20-jir geeljire ah. Bal qiyaas Faysal oo qalfoof ah iyo labo indhood oo kuuskuusan oo afarta cadcad ka bararay oo kiciwaayey. “Abaar gaagmareen baa dhacdiyo,
Gaatamoo kale e,
Saryankii garbaha weynaa,
Geed ka kiciwaaye”
Show berigaas ayaa sidii cadceeddu ugu dhacaysay ayaa shucaaca (ultraviolet) ee qorraxdu dhafoorrada madoobeeyey!
Ciilka iyo niyad jabka ayaa dowrkaan beri I haya, waxba’ba ma sheegi karo.
sidii dilo mulki heshay ayay badanaa somali u mashxaradayaan. Bal eega dulmiga loogu yeerayo guul. Dhulkaagii iyo hantidaadii ayaa lagugu qabsaday oo 40% la qaatay. Aawey guusha la sheegayo. Cid kaa awood badan hadii ay ku boobto waaba wax dhici jirey oo la yaab maleh, Laakiin kenya Haku boobto oo waliba Hakuu hanjabto waa wax ugub ku ah somali. Somalidii dalka difaaci jidhey hogaan ma hayaan oo waxay noqdeen mid hawl gab ah iyo mid la takooray iyo mid aan awooda dalka wax ku lahayn oo laga ilaaliyey. Kuwa kenya naga celin waayey ma cid kale oo kenya ka xoog badan ayey dalka iyo dadka ka difaacidoonaan. Sababta kaliya ee ay kenya u heliweydey 100% bada somaaliyeed waa afxumada iyo ixtiraam iyo aqoonsi la’aanta ay kula kacaysey ICJ. hadii ay caadi iska dhigi lahayd 100% bada waa loo xukumi lahaa. Afxumadii iyo edeb daradii ayey ku xeshay 40% maxaad moodaa hadii ay ka qayb qaadan lahaayeen oo u hagaamsami lahayeen ICJ. 7-Sano ayaa kenya la siinayey fursad ay isku saxdo. Markii ay ka samreen oo kenya edeb yeelan weeydey ayey iska siiyeen 40%.
Adoon ismahdiyey looma caqli celin karo. Caqli xumada adoonka ismahdiyey ayaa sababtay in somaaliya badeedii loo celiyo 60%. Taasu guul ma aha.
Doqon guul iyo guuldaro ma kala yaqaano.